MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA YAR EE FOX TERRIER DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Yar ee Fox Terrier Dog
Judell Lucky, waxaa cunay J. Jones, Judell Kennels. Waxaa iska leh R&C Crawford, Fleetwood Kennels. Sawir la isticmaalay ogolaansho.
Liistada eeyaha Yaryar ee Fox Terrier Mix eeyaha
min-ee-uh-cher dawaco ter-ee-er
Teryer-ka Yar-yar ee Difaaca waa nooc yar, deg-deg ah, terrier-weji macaan ah oo haysa dareenka ugaarsiga iyo adkaysiga ilma-adeeradeeda ter Territoriga ah. Taranka wuxuu lamid yahay kan Toy Fox Terrier waxaana si wada jir ah loogu yaqaan 'Mini Foxie' dalkeeda hooyo ee Australia. Miniature Fox Terrier madaxiisa sharafta leh waa mid gooni ah, oo leh dhago kacsan oo toos u istaagi kara ama isku laaban kara talooyinka oo keliya. Muuqaal kale oo lagu garto waa cagtiisa, cagteeda qaab-galka ah. Jaangooyada taranka ayaa had iyo jeer u oggolaatay dabada eyga in lagu soo xidho ama la furo. Bobtail dabiici ah ayaa la ogyahay inay dhacaan. Waxaa jira kaliya seddex midab oo la oggol yahay: madow iyo caddaan, midab iyo caddaan iyo midable (madow, caddaan iyo midab).
Daacadnimo, weydiin, cabsi la'aan, firfircoon oo la qabsan kara, Miniature Fox Terriers waxay leeyihiin ku dhowaad laba shakhsiyadood: calaamadaha ugu horreeya ee shakiga, khatarta ama qaylodhaanta, damiir xumada, ladogolaanta dabacsan ayaa isla markiiba isu bedeshay ilaaliye aan cabsi lahayn, dilaa xayawaan dilaa ah iyo ugaarsade aan cabsi lahayn. Way ku fiican yihiin carruurta da'doodu tahay inay kala soocaan eeyga iyo alaabada ay ku ciyaaraan, iyo guud ahaan inay la noolaadaan xayawaanka kale. Si kastaba ha noqotee, sida dhammaan terriers, Mini Fox Terrier ma kala sooci karo jiirka xayawaanka ama xayawaanka xamaaratada iyo xayawaannada, waana in aan kaligiis looga tagin xayawaanka noocaas ah. Ha u oggolaan inay horumariyaan Cudurka Dog yar . Ha ula dhaqmin sida aadane yar . Xusuusnow inay yihiin xayawaan kafiican duunyada. U sii iyaga waxa ay yihiin dareen ahaan u baahan sidii xayawaankaas . Haddii aadan bulsho eeygan oo kuligiis oo dhan la kulmo dareen canine , waxaa laga yaabaa inuu ku abuurto kalsooni darro wax kasta oo cusub ama ka duwan, taas oo keeni karta qaylo-dhaan xad-dhaaf ah. Waa muhiim inaad eeygaaga dibadda u soo saartid xirmo xirmo maalinle ah .
Dhererka: 9 - 12 inji (26 - 31 cm)
Miisaanku waa inuu ahaadaa mid u dhigma dhererka eeyga.
Guud ahaan waa yar yihiin. Mini Fox Terriers waxay leeyihiin dastuuro adag waana kuwo cimri dheer. Kalkaaliyeyaasha ka tirsan kooxda Mini Foxie Club ee Australia ayaa shaashadda keydka ka soo horjeedda dhibaatooyinka hidde-sidaha ee ku badan eyda yaryar.
Eeyahaani waa kuwo la qabsan kara oo la qabsan kara nolosha magaalada ama dalka. Cabbirkoodu wuxuu ka dhigan yahay inay la jaan qaadi karaan meelaha yaryar. Waxay ahaanayaan kuwo caan ah sida eey qoys oo ammaan ah, iyo dayactirkooda hooseeya iyo awooddooda inay ku maaweeliyaan naftooda haddii alaabta carruurtu ku ciyaaraan ay ka dhigto xulasho weyn oo loogu talagalay kali-keli iyo waayeelka sidoo kale.
Mini Foxies waxay ku fiican yihiin ugu yaraan jimicsi dhexdhexaad ah. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a socod maalinle ah . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku raaxeysan doonaan inay ku ciyaaraan qalabka carruurtu ku ciyaaraan iyo ciyaaraha 'caqliga' ah ee daaradda. Waxay si farxad leh u raaci doonaan milkiilayaashooda socodka iyo socodka dheeriga ah, xitaa iyagoo faras gadaal kaga tumaya fidino gaagaaban!
pictures of isku darka bulldog pitbull
Qiyaastii 10 ilaa 14 sano
Qiyaastii 2 ilaa 3 eyyo
Uguyar. Mini Fox Terriers waxay leeyihiin jaakado gaagaaban. Had iyo jeer waxaa lagu muujiyaa xaalad dabiici ah. Waa inay lahaadaan xoqitaan caguhu cadaan oo joogto ah.
Mini Foxies, sida badanaa loo yaqaan, waxaa lagu soo barbaaray Australia (iyadoo la adeegsanayo dhowr magacyo oo kala duwan) ilaa 1800-meeyadii. Terriers-yadaas adag ee adag ayaa ah farac ka mid ah noocyada dawacooyinka noocyadooda lagu soo barbaaray England waxaana keenay Australia degganayaashii hore. Noocani wuxuu ku kobcay khadad isku mid ah sida American Toy Fox Terrier. Ilaa iyo inta la go'aamin karo, Yar oo Fudud oo Dawacado Fox ah ayaa lala tallaabay Manchester (Gentlemen’s) Terriers. Ey yaryar oo ka soo jeeda qashin-qubkaas ayaa sii sii laalaadiyay markii dambena la tallaabay noocyo yaryar oo yaryar sida Ingiriis Carbeed Carbeed , Xoq iyo Talyaani Greyhound . Bixiyeyaashu waxay raadinayeen iftiin, eey dhaqso badan oo hayn doona astaamaha Fox Terrier, halka ay ugaarsanayaan cayayaanka yaryar sida bakaylaha iyo jiirka. The Miniature Fox Terrier waa nooc ka mid ah noocyada Australiyaanka ah oo run ahaan u ab ka ab qarniyo badan. Muuqaalkeedu waa mid gaar ah.
MFCA = Mini Foxie Club ee Australia Inc.
Cindy oo ka tirsan Davmac oo wata shaashad yar-yar oo Fox Terrier ah, oo uu iska leeyahay J. MacGinniskin, sawir loo adeegsaday rukhsad
“Dhag dheg jartay” Mini Fox Terrier oo la yiraahdo Squirticus, oo ay leedahay M&A Curry, sawir la isticmaalay ogolaansho
Pasqua ee Ceruti Lodge oo leh a qashin eeyo yaryar , waxaa iska leh oo soo saaray A. Field, sawir la isticmaalay ogolaansho
Geedka fuushan: Maranoa Diane Tan iyo White Miniature Fox Terrier, waxaa sameeyay F & W Mitcherson, oo ay weysay A & C Hoffmann, sawir loo isticmaalay ogolaansho
Fleetwood Amy Belle, oo ah mid yar oo Fox Terrier ah oo saddax midab leh, Bred by R&C. Crawford, Waxaa iska leh J Merchant, sawir loo adeegsaday rukhsad
Zoe BIS headshot, Jocara Rhiannan tricolored Miniature Fox Terrier, Best in Show - Castle Hill, New South Wales, Nofeembar 2006, oo uu soo saaray J Merchant, oo ay leedahay M&A Curry, sawir loo isticmaalay ogolaansho
Zoe pup, Jocara Rhiannan tricolored Miniature Fox Terrier sida eey, waxaa cunay J Merchant, oo ay leedahay M&A Curry, sawir loo isticmaalay ogolaansho
Missy Mini Fox Terrier eey yar oo jirta 4 bilood
'Me ... me me me me me me me me ....' Lucy, our Miniature Fox Terrier - Mulkiilaha Lucy ayaa leh, 'Muxuu yahay eeyo qurux badan. Aad baan uga helay iyada maalin kasta. :) '
Eygeyga waxaa la yiraahdaa Buddy oo waa eey yar oo sawirkan ku jira. Isagu waa hufane Mini Foxie oo isagu waa eey yar oo firfircoon. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyaha kale oo uu ku seexdo daboolka sariirtiisa. Wuxuu necbahay dabaasha iyo kaxeynta gaariga safarada dhaadheer, maadaama uu ku xanuunsanayo gaariga. Wuxuu leeyahay caado xun inuu ku soo boodo dadka iyo miiska banaanka. Dabeecaddiisa wanaagsan ayaa ah inuu yahay eey wanaagsan oo waligiisna uusan la dagaallamin eeyaha kale.
SUNTZU shih iyo spaniel Cocker
celceliska cabirka bulldog-ga Mareykanka
yorkie iyo min pin mix
presa canario isku dhafka dane weyn
nova scotia duck tolling retriever qas eeyo
feeryahan isku qasan adhijirka jarmalka